Wararka Maanta: Isniin, Dec 2 , 2013-Xildhibaannada Baarlamaanka oo mar kale Maanta ka Doodaya Mooshinka laga keenay Ra'iisul Wasaaraha iyo Xukuumaddiisa
Waxaa lagu wadaa inay maanta hadlaan xildhibaannadii ay shalay u suuro-geli wayday inay hadlaan, iyadoo haddii uu dhammaado hadalka xubnahan lagu wado in codka kalsoonida ah loo qaado xukuumadda.
Inkastoo uu socdo kulanka lagu doonayo in codka loogu qaado xukuumadda ayaa haddana waxaa shalay ay xildhibaannadu diideen inay dhageystaan hadal uu u jeedin lahaa ra’iisul wasaaraha Soomaaliya kaasoo ahaa mid uu isku difaacayo.
Xildhibaanno badan oo ka tirsan baarlamaanka ayaa arrintaas ku sheegay mid khalad ah oo aad looga xumaado, halka kuwo kalena ay ku sheegeen in ay tahay mid sax ah oo xukuumaddu ay tahay mid guul-darreysatay.
Si kastaba ha ahaatee ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ku adkeysanayaan in la siiyo fursad ay isku difaacaan, isagoo xusay in wixii la sameeyo isagoo aan waxba ka ogeyn ay tahay mid aanay waxba ka jirin.
Wararka ku saabsan doodda ay baarlamaanku yeelanayaan iyo wixii kusoo kordha waxaad kula socon doonaa wararkeenna dambe haddii ALLE ogolaado.